Turkiga ayaa ku soo bandhigay Muruqyadiisa Milateri Bandhig Drone ah Teknofest Istanbul. - Jowhar somali news leader
By hanad	 On Sep 25, 2021
Teknofest, oo Turkigu ku andacoonayo inuu yahay damaashaadka teknolojiyadda adduunka ugu weyn, ayaa ka dhacaya Istanbul laga bilaabo Sebtember 21-26. Oo ay la jirto, fursad ay ciidanka Turkigu ku soo bandhigaan jawharaddiisa cusub: diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Weriyayaasha Jowhar ee Istanbul, Shona Bhattacharyya iyo Ludovic de Foucaud ayaa warbixinaya.
Waxay ahayd maalin ku habboon safar -hawleed, iyo bandhigga hawada ayaa iftiimiyay quluubta dhallinyarada leh hanka qaranka Turkiga, oo ay ku jiraan carruur muujiyey waddaniyaddooda.
Gaadiid lacag la’aan ah iyo gelitaan, ma noqon doonto wax la yaab leh haddii daabacaadda sannadkan ay gaarto laba milyan oo qof oo ka qeybgalaya Teknofest 2019. In kasta oo qabanqaabiyeyaashu ay sheeganayaan in xafladda ay soo bandhigto inta badan tikniyoolajiyadda rayidka, haddana diyaaradaha dagaalka ayaa helaya feejignaan dheeraad ah, gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay soo saareen walaalaha Bayraktar.
Kaddib ololayaal lagu guuleystay oo ka dhacay Liibiya iyo Azerbaijan, diyaaraddii TB2-ta ayaa noqotay tiirarka caadiga u ah warshadaha difaaca Turkiga. Moodalka cusub, oo ah Akinci drone, wuxuu leeyahay matoor mataan ah, wuxuu leeyahay baalal dhan 20 mitir, culeyskiisuna waa lix tan marka uu duulayo.
Ku dhawaad ​​sida loogu jecel yahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa lammaanaha sameeyay: Seljuk Bayraktar, soddogga Madaxweyne Erdogan, iyo walaalkiis Haluk. Shirkaddiisu waxay ka keentay diyaaraddii Akinci diyaaraddii nooca ahayd ilaa alaabtii dhammaatay laba sano gudahood,
“Turkigu wuxuu qaatay 20 sano ka hor in Turkigu uu taageero shirkadihiisa gaarka ah,” ayuu yiri Haluk Bayraktar, oo ah maamulaha Baykar. “Marka diyaaradahan drones -ka ah waxay noqon doonaan kuwo u dhashay, sidaa darteed Turkigu wuxuu taageeray shirkadihiisa iyo bilowgooda. Waxaan ahayn shirkad soo baxaysa 20 sano ka hor, toddoba qof ”.
Turkigu wuxuu sharraxayaa in ciyaartooyda maxalliga ah ee yar yar ay u oggolaan doonaan isku-filnaansho weyn oo ay u horseedi doonaan ciidammada qalabka sida isku filnaansho buuxda, iyagoo abuuraya doonyo dilaa ah oo qiimo ahaan lagu iibsan karo… tixgeli.